Umboneleli weFenitshala yokuYila iZiko laseKhaya | ujames Bond
Ifanitshala yaseJames Bond ibijonge kwifanitshala yasekhaya yeminyaka eli-17.
Itheyibhile yeKofi yeClassic
Itheyibhile yokuDlela yaseClassic
Yiklasikhi yeTV yeKhabhinethi
Itheyibhile yeBedide yentsimbi
Usihlalo weDining Classic
Usihlalo weKlasi wokuZonwabisa
Ukubonelelwa kukaJames Bond kwamiselwa ngo-2003 kwiziko elidumileyo lokuvelisa ifanitshala yesizwe- idolophu yaseLongjiang, isithili shunde, isixeko sefoshan, esigubungela ummandla ongaphezulu kwe-50, 000 yeemitha, nto leyo iyimveliso, yentengiso yekhaya ephezulu ephelisa isofa yaseYurophu yaseYurophu. , Itafile, iti yeetheyibhile zemveliso yamashishini abucala. Iminyaka eli-16, uJames Bond enikezela ngokulandela imigangatho yokuziphatha efanelekileyo, Wazibophelela ekwamkelweni kwemigangatho, inkcubeko ebonakalayo elubala kunye nemodeli yophuhliso oluzinzileyo, kunye nokufunyanwa komzi mveliso, waphumelela "ishishini leshumi eliphezulu eTshayina", "ikhontrakthi yesizwe kunye amashishini amatyala "," Iphondo laseGuangdong kangangesithuba seminyaka eli-15 ngokuhambelana nesivumelwano kunye namashishini etyala. "
UJames Bond enikezela e-Itali ngegazi eligudileyo, athobela isiko, ukukhetha ngokungqongqo kwezinto, ezisulungekileyo, kusetyenziswa inkqubo emhlophe yokwenziwa kwesiTaliyane, ukuqinisekisa umgangatho olungileyo. Ukusuka kwi-veneer yendalo ecocekileyo yendalo ipeyinti ekhanyayo nebengezelayo yepiyano, iipaneli ezixabisekileyo nezinqabileyo ... Ngaphandle kokungafaniyo nobuchule bokukhuthaza ubugqwetha kunye nobugcisa bobugcisa, ifanitshala ibe sisixhobo esihle sokuhombisa ikhaya. UJames Bond enikezela ngobungcibi amafa aneminyaka elishumi yobugcisa kunye nenkcubeko elilifa, ufaka inzondelelo kunye nokuphefumlelwa kwindalo yobugcisa, kwaye uzabalazela ukudala eyona misebenzi yobugcisa egqibeleleyo.
Ifanitshala yethu yeklasikhi inokuphucula ubuhle bendawo, inokwenza indawo eqhelekileyo ukuba ibeqaqambile, inokuphucula uphawu lwabathengi, ifanitshala yeklasi ifana nobugcisa, asinokwazi ukuyisebenzisa kuphela, kodwa siyonwabele!
Ifanitshala yaseJames Bond igxile kwifenitshala yeklasi iminyaka eli-16, sikhetha iinkuni zaseFransi ukuba zivelise ifenitshala yeklasi, ngenxa yobunzima obuphezulu beenkuni zaseFrance, ngoko ke ifanitshala iya kuhlala ixesha elide.
Ukusuka kwi-veneer yendalo ecocekileyo yendalo ukuya kumphandle wepiyano obengezelayo nokhazimlayo, ipaneli exabisekileyo nenqabileyo
Sizimisele ukuvelisa ezona mveliso ezisemgangathweni ngamaxabiso aphezulu okhuphiswano. Ke ngoko, simema ngokunyanisekileyo zonke iinkampani ezinomdla ukuba zinxibelelane nathi ngolwazi oluthe kratya.